Nosy Resorts mitarika fanarenana amin'ny dia fialan-tsasatra manerantany
Home » Resort News » Nosy Resorts mitarika fanarenana amin'ny dia fialan-tsasatra manerantany
Toekarena nosy maro no miankina amin'ny fizahan-tany ary na aiza na aiza no hita miharihary kokoa noho ny amin'ireo nosy any amin'ny Ranomasimbe Indianina any Maldives sy Seychelles
Nahasarika mpizahatany ny fidirana mora, ferana voafetra, tranga COVID ambany, tahan'ny vaksiny tsara ary tontolo voajanahary misy torapasika mangina
Ny Emirates dia mampiakatra ny fandaharam-potoana isan-kerinandro any Maldives & Seychelles mandritra ny fialantsasatry ny paska rehefa miakatra ny fangatahan'ny Moyen Orient
Nosy Sri Lanka, Sipra ary Grika koa dia miomana amin'ny fahatongavan'ny fahavaratra amin'ny fahatongavan'ny firenena iraisam-pirenena
Ireo resort nosy manerana an'izao tontolo izao dia hitarika ny famerenana amin'ny laoniny fialamboly, araka ny fikarohana nataon'ny indostrialy farany.
Toekarena nosy maro no miankina amin'ny fizahan-tany ary tsy misy hita miharihary toy izany amin'ireo nosy any amin'ny Ranomasimbe Indianina any Maldives (28% ny harin-karena faobe) sy ny Seychelles (mihoatra ny 55% ny harin-karena faobe), izay samy manantena vanim-potoana fialantsasatry ny Paska. Miaraka amin'ireo nosy roa ireo latsaky ny adiny efatra, 30 minitra miala eo, nanatevin-daharana sidina efatra fanampiny i Emirates ary naka sidina 28 ho sidina isan-kerinandro.
Mandritra izany fotoana izany, Air Seychelles dia mandefa sidina isan-kerinandro mankany Dubai hiatrehana ny fitomboan'ny fangatahana, izay ankoatry ny sidina roa fanampiny isan-kerinandro izay ampian'i Emirates ny fandaharam-potoanany sidina dimy isan-kerinandro mankany Mahe.
"Ny nosy roa dia mamaritra ny boaty ohabolana rehetra ho an'ny mpizahatany," hoy i Danielle Curtis, talen'ny fampirantiana ME, Tsena fitsangatsanganana arabo. "Na dia mety mihoampampana aza ny fangatahana, ny mpitsidika dia mbola maniry sidina mivantana, fidirana mora foana, fameperana antonony, tranga ambany COVID, tahan'ny vaksiny tsara, fisokafana ary amin'ny tranga sasany dia misy Resorts mitokana, miaraka amina tontolo voajanahary ao anatin'izany ny morontsiraka mangina," hoy i Curtis nanampy.
Ny Maldives dia manantena ny hanaovana vaksiny 500,000 ny mponina ao aminy amin'ny volana aogositra ary miaraka amin'ny olom-pirenena latsaky ny 100,000, ny Seychelles dia manantena ny hanaovana vaksiny 100% ao anatin'ny volana ho avy.
Ary na dia samy manana ny lisitry ny firenena nankatoavina aza ny firenena roa tonta, ny Seychelles sy ny Maldives dia mitaky fitsidihana PCR ratsy 72 na 96 fotsiny isaky ny tonga, alohan'ny hahatongavany dia tsy ilaina ny porofo fanaovana vaksiny na quarantine.
Hong Kong Airlines hitsara ny Travel Pass ho fanohanana ny fanarenana ny dia